Uplatoon | January 2022
Main > Uplatoon
isebenza kanjani i-peloton
Isebenza kanjani i-peloton - efakwe ohlwini lwemibuzo nezimpendulo
Ingabe abafundisi bangakubona ku-peloton? Yebo, isikrini ebhayisikili lasePeloton nokunyathela sinekhamera yevidiyo! Kusenkabeni ephezulu yesikrini. Noma kunjalo, ayisetshenziselwa abafundisi ukukubona. Esikhundleni salokho, ikhamera yevidiyo ikuvumela ukuthi uxoxe ngevidiyo nabangani ngesikhathi sokugibela.14.08.2020
inqubomgomo yokubuyisa i-peloton
Inqubomgomo yokubuyisa iPeloton - unganquma kanjani
Ngingabuyisa i-peloton yami? Yithumele, azikho izinkinga Buyisela iPeloton yakho zingakapheli izinsuku ezingama-30 ukuze ubuyiselwe imali ngokugcwele.